Home News Farmaajo oo ku wajahan Dalka Uganda
Farmaajo oo ku wajahan Dalka Uganda
Madaxweynaha Jamhuuriytada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gabagabeeyay booqashadii ay ku joogeen dalka Turkiga iyagoo u ambabaxay dalka Uganda.
Madaxweynaha ayaa la qorsheyanayaa in maanta uu kulan la yeesho madaxweynaha Uganda Yuweri Musseveni oo uu kula kulmi doono Magaalada Kampala ee xarunta u ah dalkaasi waxaana ay ka wada hadli doonaan sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labbada dal.
Dalka Uganda ayaa ah dalka ciidamada ugu badan ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ay ka socdaan waxaana labbada madaxweyne ay sidoo kale diirada saari doonaan sidii Uganda ay Soomaaliya garab buuxa ugu siin lahyed la dagaalanka Shabaab.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhawanahaan booqashooyin ku kala tagay dalalka Taliyaaniga iyo Turkiga iyadoo booqashadiisa la filaayo in uu kusoo gabagabeeyo dalka Kenya.
Previous articlemaxay kawada hadleen Madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa Dalka Turkiga
Next articledagaal culus oo markale ka qarxay Gobolka Gedo
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo wada eedeeymo ka dhan ah RW Rooble.
Baarlamaanka Jubbaland oo Axmed Madoobe u kordhiyay waqtiga uu kusoo dhisaayo...
Maamulka Soomaaliland oo Shaaciyay Qasaaraha Roobabkii da’ay Geeysteen!!